Mikarakara Fitsapankevitra Hijanonany 35 Taona Mahery Eo Amin’ny Fitondràna ao Kongô i Sassou-Nguesso · Global Voices teny Malagasy
Mikarakara Fitsapankevitra Hijanonany 35 Taona Mahery Eo Amin'ny Fitondràna ao Kongô i Sassou-Nguesso
Voadika ny 04 Novambra 2015 8:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, Swahili, Nederlands, Français
Dennis Sassou Nguesso tao amin'ny wikipedia CC-BY-20
Filoha 4 amperinasa ao Afrika (Roandà, Borondi, Repoblikan”i Kongô ary ny Repoblika Demaokratikan'i Kongô) no miezaka manalava ny fe-potoana fiasàny hihoatra ny fetra napetraky ny lalàm-panorenana any amin'ny tany misy azy avy. Ao Kongô Brazzaville, nisy fitsampankevitra naroson'ny filoha Denis Sassou-Nguesso mba hahafahany mirotsaka indray hofidiana. Fepetra vaovao nolavin'ny mpanohitra ara-politika ary niteraka fahafatesana maro nandritra ireo fihetsiketsehana maro teny andalambe tao Brazzaville (renivohitry ny firenena).
Sassou-Nguesso no filohan'ny Repoblika entim-bahoakan'i Kongô nanomboka 1979 hatramin'ny 1992 ary filoha mbola amperinasa ao amin'ny Repoblikan'i Kongô nanomboka ny 1997.
Hetsi-panoherana #Sassoudegage (SassouMiala) avy amin'ny kabolokongo.com
Fifandonana nahery setra nandritra ireo hetsi-panoherana ny fitsapankevitra
Feran'ny lalàm-panorenan'ny Repoblikan'i Kongô (antsoina ihany koa hoe Congo-Brazzaville) ho 70 ny taona ahafahana mirotsaka hofidiana any indroa ny fe-potoana fiasàna ho an'ny filoha.
Tany am-piandohan'ny taona 2015, nikarakara andianà fifanatonana tamin'ireo mpisehatry ny politika tao amin'ny fireneny i Sassou-Nguesso mba handinihana ny mety ho azo hanovàna ny Lalàm-panorenana manankery efa hatramin'ny 2002 ao amin'ny firenena. Efa nanakiana be ilay fomba famindra ireo mpanohitra, izay mahita hafetsifetsena ao anatiny ikendrena ny hahafahana mirotsaka fanintelony ho filohan'ny Repoblika indray.
Karakarain'i Sassou-Nguesso ihany anefa ilay fitsapankevitra izay natao hakàna ny hevitry ny vahoaka raha toa ka eken'izy ireo ny hanavaozana ny lalàm-panorenana.
Niantso fanaovana ankivy an'ilay fitsapankevitra ny mpanohitra ary dia nipoaka talohan'ilay fitsapankevitra tany amin'ireo tanàndehibe tao amin'ny firenena ireo hetsi-panoherana an'i Sassou-Nguesso (indrindra fa tao Brazzaville sy Pointe-Noire) mb hanoherana ilay tanjony farany. Nambaran'ny manampahefana fa 4 no maty ary 10 no naratra.
Any anaty tambajotra sosialy, miparitaka ireto tenifototra toy ny hoe #Sassoufit sy #Sassoudegage mba hanoherana ny zava-kinendrin'ny filoha.
Na teo aza ny taha tena ambany tamin'ny fandraisana anjara (10%), nankatoavin'ilay fitsapankevitra ny hanavaozana ny lalàm-panorenana.
Tenifototra #sassoufit nandritra ireo fihetsiketsehana nanoherana an'i Nguesso, tao amin'ny canalfrance info
Ho aiza i Congo-Brazzaville ?
Ho an'ny mpanohitra, ny taha ambany tamin'ny fandraisana anjara dia midika hoe toherin'ny vahoaka ilay fanavaozana izay hanome fahafahana an'i Sassou-Nguesso hijanona ho filoha.
Ismaël Bowend NABOLE, mpanangona vaovaon'ny Omega fm ao Brazzaville, manoratra hoe lavin'ny fanoherana ao Kongô ilay fanapahankevitra noraisina nandritry ny fitsapankevitra:
Ho an'ny iray amin'ireo sehatra tena an'ny mpanohitra dia « fanonganam-panjakàna araka ny lalàm-panorenana » ilay fitsapankevitra natao, satria « sady tsy nalalaka, no tsy marina, no nitanila, no tsy mangarahara ilay fifidianana » izay notanterahana tao « anaty fahirano ».
Tsy resy lahatra amin'ny ho maha-azo itokiana ireo vokatra nambara ihany koa ny fianakaviambe iraisampirenena sy ireo mpanaramaso ny fifidianana. Michel Taube, talen'ny “Opinion Internationale”, manazava ny toerana raisin'i Frantsa manoloana io fifidianana io :
ialàn'i François Hollande, filohan'ny Repoblika Frantsayi Denis Sassou-Nguesso. Tao anaty filazàna efa taty aoriana, toarian'ireo teny natao ny omalin'io ary nahakivy an'i Afrika manontolo, « manameloka izay rehetra herisetra no sady manohana ny fahalalahana maneho hevitra ny ao Elysée. [François Hollande] mampahatsiahy fa niriany, nandritry ny kabary nataony tany Dakar, ny 29 Novambra 2014, ho voahaja ireo Lalàm-panorenana ary ho ao anaty mangarahara tsy azo hiadiana hevitra no hanatanterahana ireo fakànkevitra amin'ny fifidianana. Nefa mazava fa miaraka amin'ilay fitsapankevitra nokasainy hatao ny Alahady, tsy manaja ny Lalàm-panorenan'i Kongô i Denis Sassou-Nguesso ary tsy manome antoka na kely aza hisian'ilay mangaraharaha tsy azo hiadiana hevitra.
Ampian'i Taube hoe io toerana raisiny io no hanery ireo andaniny sy ankilany mpifanandrina hanamafy ny heviny ary mety betsaka ny zavatra tsy ampoizina hivoaka amin'ilay famahàna ny olana:
Aoka ho tsaroana : tany Tonizia toy ny tao Burkina Faso, ora vitsy talohan'ny latsabato, Ben Ali sy Blaise Compaoré samy tsy nisy nihevitra hoe ao anaty fikoropahana no hialàny amin'ny fitondràna, ary amin'ny farany dia ny demaokrasia no handresy manoloana ny fibodoana fahefana ataon'olona iray.
Feno fanantenana ny tanora Kongôle saingy miahiahy ihany koa momba ireo tombontsoa politika tafiditra anatin'io. Tanora mpianatra ry Josué Mfutila Kiangata, Aaron Malu Mukeba sy Martin Nomapungu ary izy ireo no manome antsika ny fomba fijeriny ny demaokrasia ao Afrika :
Mihiaka fandreseana sahady dieny mbola any alohan'ny fifidianana ny sasany amin'ireo mpirotsaka hofidiana ; sahala amin'ny manisika ry zareo hoe miara-mirona amin'izany ireo mpitarika andrim-panjakana misahana ny fifidianana. Kanefa ireny andrim-panjakana ireny tsy afaka hiandàny, tsy maintsy mahaleotena. Io rantsana io dia ahitàna ireo mpanao pôlitika ; tonga ao miaraka amin'ny firehany ara-politika ry zareo.
Heveriko fa iraisan'ny tany tontolo ny fotokevitra demaokratika ary natao hanaja ireny fotokevitra ireny isika. Tsy iombonako hevitra ireo izay mihevitra hoe rafitra tsara ny rafitra ifandovàna ampiharin'ny afrikàna.
Ampianarin'ny boky aman-gazety antsika fa tokony ho anaty tontolo milamina no ikarakaràna fifidianana. Nefa aty Afrika, tsy izany no zava-misy. Nahoana ? Satria kolontsaina indramina izy io, kolontsain'ny Tandrefana izay tonga mba hoterena hapetraka eto Afrika.
Hozongozonin'ny tanora afrikana izay mangetaheta hetsika vaovao ny fanjakàn'ireo filoha mitondra mandra-maty aty Afrika.